Raiisul Wasaare daqiiqadaha aad ku sameyneyso xayeysiisku waxa ay ka go’an tahay waqtigaaga siyaasadda ee kooban. – Hornafrik Media Network
MAQAALOTOOSHKA HORNAFRIKWARARKA MAANTA
Waa ogahay in aan leenahay dabeecadda idaha, oo aan cirka arag illaa maalinka ay adduunka ka tegayaan, sidaas oo kalana marka bahal cunayo ma shanqaraan sidaas awgeed idaha iyo xayawaanka u dhowba xog la’aanta ayaa u loogta bahalka cuna.
Balse waa in aan sheego waxa aan arkayo iyo waxa soo uraya.
Raisalwasaare Kheyre Waxa uu ku mashquulsan yahay iidheh iyo xayeysiis aan filayo in uu ka turjumaya caqliga Copy & Past.
In jidka gaadiidka maraya la joojiyo si inta Dhambal loo dhigto, Cunto baco ku jirta iyo biyo caagado xiran ku jira loogu Afuro, iyada oo ujeedku yahay in la baahiyo iidhehda Baraha bulshada ee adeegyada.
Ama in Jid kale inta la xirto Ciyaarta taraqa lagula maararoobo dhallinyaro barkood dhinteen kuwo dhaawac yihiin kuwana ku jiraan gacanta Liibiyaan ka macaasha Dhallinyaro loo ogolaado marka la qabsado wax aan loo ogoleyn marka ay dalka joogaan.
Raisalwasaare aniga oo ku xushmeynaya sabab ah in Baarlamaan Soomaaliyeed kalsooni ku siiyeen haddana daqiiqadaha aad ku sameyneyso xayeysiisku waxa ay ka go’an yihiin waqtigaaga siyaasadda ee kooban.
Wixii madaxweynuhu u sheegay Baarlamaanka Soomaaliyeed iyo Ballanqaadkiisii faraha badnaa ayaa kamid ah shaqada kuu taal, markaas waqti aad ku faraxdo iyo mid aad ku sameyso xayeysiis kuuma yaal.
Kala hormarinta howlaha ayaa muhiim kuu ah,
Waana in aad ogaato in xilliga collaadda aan saaxiibadaada lala hadlin hayeeshee la la hadlo Cidda kaa soo horjeedda
Anigu Ma ihi micaarad hubeysan mana ihi Muxaafid jadbeysan.
W.Q:-Axmad Ciise Guutaale
Fahad Yaasiin oo u ambabaxay Qadar iyo Somalia oo Qatar Diblomaasiyadeed wajahaysa.